Vivo Y9s waa mobilada cusub ee la bilaabay ee leh Snapdragon 665 | Androidsis
Shiinaha ayaa uqalma casriga casriga ah. Waxaan ku noolahay, inaan hawad cusub siiyo S1 Pro rasmi ah laga dhigay bishii May ee sanadkan, halkaas ayuu ka bilaabay sida Vivo Y9s.
Waxaan haynaa dhammaan faahfaahinta qiimaha iyo helitaanka suuqa, iyo sidoo kale tayada iyo bilicsanaanta (oo aan ahayn wax cusub) hoosta.
1 Dhammaan wixii ku saabsan Vivo Y9s
Dhammaan wixii ku saabsan Vivo Y9s
Si laga bilaabo, shaashadda qadka dhexe waa tiknoolajiyadda AMOLED waxayna cabirkeedu dhan yahay 6.38 inji. Qaraarka ay soo saarto waa FullHD + oo ah 2,340 x 1,080 pixels qaabka caato ee uu leeyahayna waa 19.5: 9. Akhristaha sawirka faraha ayaa ku dhexjira shaashadda hoosteeda, sidaas darteed qeybta dambe kaliya waxay yaalliin nidaamka kamaradaha afar geesoodka ah ee ay adeegsadaan, kaas oo ay weheliyaan flash-ka LED-ka, waxay leeyihiin dareemayaasha soo socda: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP. Kaamirada hore waa 32 MP.
Processor-ka kujira calooshiisa waa Snapdragon 665. Si loo labalabeeyo waxaa la heli karaa RAM 8 GB ah iyo meel keyd ah oo gudaha ah oo dhan 128 GB, taas oo lagu balaarin karo iyadoo la adeegsanayo kaarka microSD oo gaaraya ilaa 256 GB. Batariga ay sidato waa 4,500 mAh waxayna leedahay taageero si deg deg ah loogu soo oogo 18 W.
Screen: AMOLED 6.38 inji oo leh FullHD + xalka 2,340 x 1,080 iyo 19.5: saamiga 9
GacaliyeQalabka: Qualcomm Snapdragon 665
Kaydinta Gudaha: 128 GB (oo lagu ballaarin karo microSD illaa 256 GB)
Cámara trasera: 48 Xildhibaan + 8 Xildhibaan + 2 Xildhibaan + 2 Xildhibaan
Nidaamka hawlgalka: Android 9 Pie oo leh Funtouch OS 9
Batariga: 4,500 mAh oo leh taageero loogu talagalay 18-watt si dhakhso ah loogu soo oogo
Xuduudaha kala duwan: 4G, Wi-Fi 802.11 a / c, Bluetooth, micro USB, GPS, GLONASS
kuwa kale: Akhristaha Faraha Sawirka hoostiisa
Cabbirada: 159.25 x 75.19 x 8.68 mm
Peso: 186.7 garaam
Vivo Y9s oo leh nambarka nooca Vivo V1945A ayaa ku qoran Shiinaha Telecom oo leh a qiimaha 2.198 yuan (apx. 283 euro qiimaha sarifka). Taleefanka ayaa laga yaabaa inuu qiimihiisu ka duwan yahay kolkuu rasmi yahay. Liiska ayaa sheegaya in Vivo Y9s laga bilaabi doono suuqa Shiinaha berri (Nofeembar 24). Glazed Black, Nebula Blue, iyo Magic Clear Sky waa daabacadaha midabada leh ee taleefanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Vivo Y9s waa taleefan cusub oo casri ah oo la soo saaray oo leh Snapdragon 665